Izandi zaseLwandle Cottage - I-Airbnb
Izandi zaseLwandle Cottage
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDarren
Indlwana epholileyo engaselwandle ilungele ukuba kude nolwandle, ijinga phezu kwamanzi e-Miles Cove enembono engathintelwanga yeGreen Bay. Ipropathi inendlu yokulala eqaqambileyo neyodwa esanda kulungiswa kunye negumbi lokuhlala eli-1 elinendawo yokuhlala kunye nekhitshi lokutyela zonke ezinombono wolwandle. Igumbi lokuhlala linokufikelela kwidesika apho uya konwabela ukujonga amanzi kunye nelanga eligcweleyo imini yonke. I-Cottage inegumbi lokuhlambela eligcweleyo elinebhafu kunye neshawari. Ipropathi ixhotyiswe ngewasha kunye neline yokunxiba.
Yonwabela izandi zolwandle njengoko usiya kulala ngorhatya kunye namaza ajikeleza ngobunono elunxwemeni phantsi kwefestile yakho. Emva koko vumela umnxeba weengabangaba ukuba zikuvuse ikofu yakho yasekuseni njengoko uphumla edesika kwaye ubukele i-cove iphila.
IMiles Cove yindawo ekhuseleke kakhulu kwaye enobuhlobo kwindawo yasemaphandleni yaseNewfoundland apho unokubalekela khona usuku nosuku oluxakekileyo lwamaziko amakhulu. I-cottage ibekwe kwindlela yegrabile ene-traffic encinci apho unokonwabela ukuhamba ngokukhululeka okanye uvumele abantwana ukuba bazulazule ngokukhululekileyo ngaphandle kokukhathazeka kwamaziko amakhulu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Miles Cove